IELTS 1001 ways - Izinhlelo ze-Android ku-Google Play
Thola idivayisi yami
- Mashi 13, 2016
Kunezindlela 1001 izindlela lokukhuluma isiNgisi enye indlela fun ukuba siwamukele.
"Izindlela 1001" kuyinto fun kanye lokusebenza mobile educative evumela ukuba ufunde nangezindlela ezihlukahlukene kuye ngendawo English kusukela kuwo wonke umhlaba. Okufanele ukwenze nje babukele ividiyo umuntu okhulumayo ukuqagela lapho umuntu kusuka. Avivinye amakhono akho okulalela wayeseba uchwepheshe nanendlela!
A video sizovela of umuntu ethi «Kunezindlela 1001 izindlela lokukhuluma English».
Lalelisisa kuya ngendlela bese uzame ukuqagela lapho umuntu kusuka.
Ukurekhoda ividyo 5-wesibili wena uthi: «Kunezindlela 1001 izindlela lokukhuluma English». Video wakho niyozenezelelwa the game, nabanye ukudlala lo mdlalo kungakusiza ukuqagela uvelaphi!
Cela abangani bakho! Uma unenkinga ukuqagela impendulo lengiyo, sebenzisa wakho inethiwekhi media social ukwabelana ividiyo bese uthole amacebiso kubangane bakho!
Hlola isimo sakho!
Ungathatha look at simo sakho kazwelonke global kumenyu Fun Stats. Yabelana isikolo sakho bese inselelo abangane bakho noma kunini!
Le «1001 izindlela» uvezwa yi-British Council ngubani ngokuhlanganyela owned IELTS.
IELTS kuyinto test imfundo ephakeme futhi yokufuduka global ngolimi lwesiNgisi ethandwa kakhulu emhlabeni. Manje kwamukelwa yizinhlangano ezingaphezu kuka 9.000 emazweni 135 emhlabeni wonke - kubandakanya insitutions kuka 3,000 in the USA.
Buyekeza kusukela ku-
Mashi 13, 2016
Vakashela iwebhusayithi I-imeyili ielts.marketing@britishcouncil.org Inqubomgomo Yemfihlo
Zingaki imibuzo lwelulwimi kanye nesipelingi Ungayiphendula ngemizuzwana 60?
izifundo Mahhala, amasampula, amagama, imibuzo, umkhuba ithuluzi IELTS Ukukhuluma
Free, self belungiselela Academic General ingxenye IELTS lokubhala ukuhlolwa.
Indlela elula nephumelelayo sifinyelele amaphuzu okuhle IELTS
Ulungele IELTS and ngcono silulumagama yakho nge IELTS Word Power.
Listening kuyindlela engokwemvelo ukuba afunde ulimi. Vele Lalela. Enjoy!
Funda IsiZulu Ukulalela okulotshiweyo kusukela VOA, BBC; ukusekela inthanethi kanye okungaxhunyiwe
IELTS Ukukhuluma Ukunikezwa izinto kangcono IELTS nokulungiselela umkhuba.
IELTS Ukubhala uhlelo lokusebenza ezimangalisayo ukukusiza ukwakha IELTS yakho eqondiwe band.
Funda English amazwi silulumagama for IELTS nge emakhadigama laphatselene free kusuka Magoosh.
IELTS Test Prep - Free for wonke
Ixhuma IELTS abafundi, okwenza IELTS Ekhuluma ucezu ikhekhe!
Tadisha for the IELTS nge Magoosh video izifundo owadalwa test PrEP ochwepheshe.
Isicelo ngokweseka IELTS lokubhala practice
200 Ukuvivinywa IELTS uhlelo lolimi. Kukusize ukuthuthukisa kuwe lolimi English.
Phambili silulumagama yakho English imibuzo 200+ ematheksthini audio futhi baqonde izinto ezenzekayo.
Umfutho emakhono ekulalela nalesi podcast bezijabulisa mayelana ekuphileni kwansuku zonke.
Mahhala ishadi lwemisindvo ukukusiza nge your pronunciation IsiZulu
Thuthukisa ekulalela yakho! Amavidiyo futhi ahambisane audioscript.
Sithuthukise amakhono English ukulalela futhi ufunde mayelana UK sika umculo, ezemidlalo nokuningi.
Thuthukisa futhi ephelele kwakho ngokunembile lolimi imibuzo kuka 1000 practice!
Thuthukisa uhlelo lolimi ukunemba kwakho nge umkhuba imibuzo MAHHALA kuka-1000!
Bukela Classic video izindaba ezifana Little Red Riding Hood. With subtitles!
Uhlelo lokusebenza likwazi ukwaziswa okugcwele mayelana Education UK embukisweni emzini wakho.
Timmy nabangane lapha ukusiza ingane yakho ukufunda isiNgisi!
Timmy nabangane emuva kule yokufunda lokusebenza English!
Funda mayelana izinombolo, bobunjwa nokuningi nge Timmy & abangane!
©2017 Google Imigomo Yesevisi Yesayithi Ubumfihlo Onjiniyela Abaculi Mayelana ne-Google